ubukhali nokuphambili - yintoni umahluko?
Eyona Qa Ubungqongqo kunye nokuPhambili - Yintoni umahluko?
Zombini ubuNzima kunye nokuPhambili ziimpawu zesiphene kwaye kufuneka zinikezwe kwingxelo yegciwane. Olu lwazi lusetyenziselwa ukumisela ukuba i-bug kufuneka ilungiswe ngokukhawuleza kangakanani.
Ubunzima ngokuchasene nokubekwa phambili
Ubunzima besiphene bunxulumene nokuba bug kangakanani bug. Ngokwesiqhelo ubungqongqo buchazwa ngokwelahleko yemali, ukonakaliswa kwendalo, igama lenkampani kunye nokulahleka kobomi.
Eyona nto iphambili kwisiphene inxulumene nokuba i-bug kufuneka ilungiswe ngokukhawuleza kangakanani na kwaye isasazwe kwiiseva eziphilayo. Xa isiphene sinobukrakra obuphezulu, kunokwenzeka ukuba sibeke phambili. Kwangokunjalo, isiphene sobukhali esisezantsi siya kuba nokubaluleka okuphantsi ngokunjalo.
Nangona kuyacetyiswa ukubonelela ngobunzima kunye nokuPhambili xa ufaka ingxelo yesiphene, iinkampani ezininzi ziya kusebenzisa enye, njengesiqhelo.
Kwingxelo yegciwane, Ubunzima kunye nokuPhambili kuhlala kugcwaliswa ngumntu obhala ingxelo ye-bug, kodwa kufuneka iphononongwe liqela liphela.
Ubunzima obuPhakamileyo-iBug ePhambili
Kulapho indlela enkulu ngokusebenzisa isicelo yaphulwe, umzekelo, kwiwebhusayithi yeCommerce, bonke abathengi bafumana umyalezo wemposiso kwifom yokubhukisha kwaye abanakho ukubeka iiodolo, okanye iphepha lemveliso liphosa Impazamo eyi-500.
Oku kwenzeka xa ibug ibangela iingxaki ezinkulu, kodwa yenzeka kuphela kwiimeko ezinqabileyo kakhulu okanye iimeko, umzekelo, abathengi abasebenzisa izikhangeli ezindala kakhulu abanakuqhubeka nokuthenga imveliso. Ngenxa yokuba inani labathengi abanezikhangeli ezindala kakhulu liphantsi kakhulu, ayisiyiyo eyona nto iphambili ukulungisa lo mbandela.
Eyona nto iphambili kwindawo leyo-Ubunzima beBug
Oku kunokwenzeka xa, umzekelo, ilogo okanye igama lenkampani lingaboniswanga kwiwebhusayithi. Kubalulekile ukulungisa umba ngokukhawuleza, nangona kungenakubangela monakalo omkhulu.
UkuPhambili ngokuPhantsi-Ubunzima beBug
Kwiimeko apho i-bug ayibangeli ntlekele kwaye ichaphazela kuphela inani elincinci labathengi, zombini Ubunzima kunye nokuPhambili kunikwe indawo ephantsi, umzekelo, iphepha lomgaqo-nkqubo wabucala lithatha ixesha elide ukulayisha. Ababaninzi abantu abajonga iphepha lomgaqo-nkqubo wabucala kunye nokulayisha kancinci akubachaphazeli abathengi.
Oku kungasentla yimizekelo nje. Liqela ekufuneka lithathe isigqibo malunga nobunzima kunye nokuPhambili kwi-bug nganye.
yongeza icebo leselfowuni verizon
Uvavanyo lwekhadi le-sd eliyinyani
IMetroPCS yongeza iAlcatel One Touch Fierce kunye neAlcatel One Touch iguqukela kulungelelwaniso lwayo
Ungazisusa njani izinto kunye nabantu kwiifoto ngeGPS S21?
Ikhamera yesenzo yeGoPro Hero 3 irad ngokupheleleyo! Nazi iiapos zendlela yokuyilawula kwi-smartphone